Firefox 55, iyo inomhanyisa vhezheni kusvika zvino, yave kuwanikwa Gnu / Linux | Linux Vakapindwa muropa
Sezvakarongwa, Mozilla yakaburitsa Firefox 55, yazvino vhezheni yakagadzika yewebhu webhu. Iyi vhezheni haisi kuenda nekusazivikanwa, kure nazvo. Wese mushandisi uyo akambozviedza anotosimbisa kuti iri rakagadziridzwa vhezheni uye nekukurumidza chaizvo kana ichienzaniswa neshanduro dzayo dzekare. Chinhu chakamutsa kuda kuziva kwevazhinji vashandisi.
Saka zvinoita kunge CEO weMozilla Chris Beard akarurama uye mazwi ake ekupedzisira nezve Firefox 57 chichava chaicho. Zvirinani kana tichifunga nezve mafungiro evashandisi veFirefox 55.
Mozilla Firefox 55 kwete chete inogadziridza kurodha peji uye inoita nekukurumidzazvinopfuura zvakaringana kune vazhinji vashandisi vewebhu webhu, inowedzerawo mashandiro matsva uye inogadziridza kushandisika kwebhurawuza, pasina kusiya huzivi hweMozilla.
Firefox 55 inosanganisa chishandiso chekutora peji rewebhu
Iyo itsva vhezheni inosanganisira tsigiro yeiyo chaiyo chaiyo matekinoroji, chimwe chinhu chichava chaichoicho nekuda kwechokwadi magirazi. Kune rimwe divi, Mozilla iri kutogadzirira "iyo Adobe Flash kudzima magetsi." Saka, iyo plugin Adobe Flash ichave iripo asi isina kuvhurwa nekutadza, iyo yatichafanira kubaya meseji inoonekwa kana webhu ichikumbira plugin.
Kugadziriswa kwemamenyu eFirefox uye zvinhu zvakagadziridzwa uye izvozvi zvinogona kuitwa zvirinyore kuburikidza neyekufarira menyu. Quantum inosanganisirwa mune iyi vhezheni uye izvo zvinoita kuti mashandiro aonekwe nani asi handicho chete chishandiso chakabatanidzwa mune iyi vhezheni. Mozilla yaisanganisira chirongwa chekutora chinovhara chinotibvumidza kutora mapeji ewebhu, tsika yandinoona ichiwedzera ichiitwa pakati pevashandisi.
Kugoverwa kwakakurumbira kunosanganisa iyi vhezheni mune yavo yepamutemo marekodhi. Asi kana iwe usiri kuda kumirira kuyedza iyi vhezheni, mune izvi link Unogona kudhawunirodha iyi vhezheni yaunokwanisa kuisa pakombuta yako wega. Mozilla Firefox 55 inokatyamadza vashandisi vazhinji, chimwe chinhu chakanaka kune avo vakavimbika kuMozilla Firefox, asi handiyo chete imwe nzira kuGoogle Chrome.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Firefox 55, iyo inomhanyisa vhezheni parizvino, yave kuwanikwa yeGnu / Linux
Ini ndichangobva kuvandudza kuita vhezheni 55, zvisinei ini ndinoona kuti vabvisa iyo «Preview» hwindo kubva paWebhu Rovandudza sarudzo, unoziva chero chikonzero nei? Zvaibatsira kuona kuti mibvunzo yeAjax yaibata sei ...